Iiholide zaseKenya Safari, Safaris eKenya, Safara yoHlahlo-lwabiwo mali yaseKenya, Safari yaseKenya, Safaris yeholide
Ukhuseleko lweholide yoHlahlo-lwabiwo mali
IKhenketho yeKenya, iKenya Safari, iKenya Safaris, ukhenketho lwaseTanzania
EKenya Lodge Safaris
I-Kenya Camping Safaris
Ukunyuka kweNtaba iKenya
IKenya - iTafaris yaseTanzania
Tanzania Indawo yokuhlala yaseSafaris
Tanzania Ikampu yokuhlalisa
I-Mt Kilimanjaro Ukunyuka kweSafaris
IKENYA SAFARI HOLIDAYS
Eyona nto ibalulekileyo yohlahlo-lwabiwo mali kunye nokhenketho lweendwendwe oluhle ngaphakathi Khenya I-Tanzania isondele kwimiphefumlo yentlango yase-Afrika kunye namava endalo.
Ukuhamba neengcali ezaziyo iAfrika.
Indawo yokuHlala ngeBhajethi uSafaris ngumnini wabakhenkethi eKenya naseTanzania, ebonelela ngoluhlu lweenkonzo zohambo olubanzi kubantu abathile nakumaqela kula mazwe mabini. Indawo yokuHlala ngeHolide yoHlahlo-lwabiwo-mali isebenza ngoochwephesha abaqeqeshiweyo, abanamava ngaphezulu kweminyaka elishumi kwicandelo lezokhenketho. Inkampani isebenzisana namahlakani aphambili kwiCandelo lezoTyelelo kunye neNdwendwe eKenya naseTanzania ukubonelela ngeenkonzo ezilungileyo kubathengi. Sineenkonzo ezahlukileyo ezinokwenziwa ukuze zilungele iimfuno zakho kwaye abasebenzi abakhethekileyo basebenze kunye ukubonelela ngeenkonzo ezilungileyo kubathengi bethu abahlukeneyo. Ifumaneka kwiZiko lesiXeko saseNairobi, iiofisi zethu zivulwa yonke imihla ukusukela ngentsimbi yesi-7: 00 kusasa, ngeentsuku ezisi-7 ngeveki, zibonelela ngenkxaso kunye nezicelo ezingxamisekileyo, nge-24/7
I-3 YOSUKU LWE-KENYA IKHAYA: IPHAKATHI YEMASAI MARA
Indawo yokufika yeNkulumbuso yaseKenya, indawo ekugcinwa kuyo imidlalo yaseMasai Mara, yindawo edumileyo yomdlalo wehlabathi ngenxa yokufuduka kweentaka zasendle, ezaziwa ngokuba yiMigration Migrate, ezidweliswe njengommangaliso wesibhozo wehlabathi.
Iintsuku ezi-5 MT KENYA CLIMB- SIRIMON-SIRIMON ROUTE
Khwela kwihlathi uye kwindlela ebanzi yomda kwindawo yengqungquthela. Indlela iqala kwicala elingasentla-ntaba ecaleni kwentaba kufutshane neNanyuki. Ukufikelela kwanele kwaye izakhiwo zendlu ezinamabhongo zezona zilungileyo kweli cala lentaba.
I-6 IMINI KENYA SAFARI: MASAI MARA-LENZA NAKURU - AMBOSELI
Ichibi laseNakuru belisoloko lithathwa njengelifanelekileyo njengelaseFlamingo echibini. Umahluko kunye nokusahlula phakathi kwechibi le-soda elingaxinanga kunye neentaka zalo eziphambili kunye neenkuni ezivulekileyo.
I-6 IMIHLA YOKUGQIBELA KILIMANJARO UKUTHENGA: I-MACHAME ROUTE
Le yeyona ndlela intle iyenyukayo eKilimanjaro. Zonke izixhobo zakho kunye nezinto onazo ziyahanjiswa kwaye umpheki ulungisa konke ukutya kwakho, Apho indawo yokuhlala kwindlela yaseMarangu ineendawo zokuhlala.
I-8 BASUKU BUDGET HOLIDAY SAFARI - MASAI MARA
Ubusuku obu-3 kwiMasai Mara Game Reserve-Kenya, apho uya kufumana amava okuqhuba ngaphezulu komdlalo omnye. Ubusuku obu-1 kwiChibi laseNakuru apho ufika ubone iiclombos, ezimhlophe namnyama imikhombe nokunye.
I-10 YEMIHLA KENYA KUNYE NOKUFUNDA KWE-TANZANIA SAFARI: IMASAI MARA
Iintsuku ezili-10 uhambo lwaseKenya kunye neTanzania lwasendle yindlela yokuhamba ekhempini enika amava endalo oyinyani. Sigubungela iMasai Mara, iLake Nakuru, iSerengeti, iNgorongoro Crater kunye neLake Manyara.
IIPHAKHISI ZOKUFUNDA ZOKUFUNDA I-SAFARI
Ukhuseleko lweholide yoHlahlo-lwabiwo mali iimveliso zibandakanya ingqokelela ebanzi ye safaris kwi Khenya kwaye Thanzaniya kwaye Uganda. I-Lodge Safaris Luxury kunye nomgangatho ophakathi ISafe Target Camping, IiNkampu zeTafile eziGqibeleleyo zeTende, Ukunyuka kweNtaba Kenya, Ukuhamba ngeSafaris iihambo ezizodwa eziya kumazwe ahlwempuzekileyo, inkcubeko kunye nokhenketho lobuhlanga kunye neeholide zaselwandle.
Zombini ukuhamba rhoqo kunye neTailor ezenziwe safaris zinoxabiso kukhuphiswano kwaye yenzelwe ngokukodwa ukulingana nohlahlo-lwabiwo mali lwakho. Ukhuseleko lweholide yoHlahlo-lwabiwo mali Ukuhanjiswa kwesikhululo seenqwelomoya sabucala phakathi kwesikhululo seenqwelomoya i-Kilimanjaro kunye ne-Arusha. Sineenkonzo zomhlaba ngokunjalo, ezibandakanya ukubhukisha iihotele kunye nokutshintshelwa kwesikhululo seenqwelomoya kwiihotele ezixekweni kunye neehotele ezingaphandle kwesixeko.
Indawo yokuHlala ngeBhajethi uSafaris ngumnini wabakhenkethi eKenya naseTanzania, ebonelela ngoluhlu lweenkonzo zohambo olubanzi kubantu abathile nakumaqela kula mazwe mabini.
Iihotele kunye neeSafari zeLodges
Inkonzo yethu yabathengi kunye nokhenketho
Isikhokelo sikulungele ukunceda.
Indlu yeStEllis, isitrato saseWabera
© 2019. Onke amalungelo agciniwe. Ukhuseleko lweholide yoHlahlo-lwabiwo mali
Uyilo lweWebhu ngalo Webscreationsdesign.com